မူဆလင် သူဌေးတစ်ဦးကို နစကမှ လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေး | The FNG
မူဆလင် သူဌေးတစ်ဦးကို နစကမှ လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေး
July 18, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွင် ဘင်္ဂလီများအား ကူညီအားပေးခဲ့သူ ဘင်္ဂလီမူ
ဆလင်သူဌေးတစ်ဦးကို နစက လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေးနေသည်ဟု သိရသည်။
ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သော ဘင်္ဂလီ သူဌေးမှာ မောင်တောမြို့မှ နာမည်ကြီး7Stars အလီဖြစ်သည်။
သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နစကနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက အာရ်ကန်တိုင်း
” မောင်တောမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ အာလီက ကြိုးကိုင်ပြီး လှုပ်ရှားနေသူ တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်
သူ့ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ နစက က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခု
ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ သူ့ ကို နစက ဌာနချုပ်က လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်
မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စွပ်စွဲချက်များဖြင့် နစက
ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကြီးကို နေပြည်တော်မှ စစ်ဆေးရန် ခေါ်ယူသွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း
တွင် လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး7Starsအလီအား ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
7 Stars အလီမှာ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်က7Stars အမည်ဖြင့် တည်းခိုခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ
တည်းခိုခန်းတွင် လူမရောက်သည့် အတွက် ပိတ်ခဲ့ရသည်။7Stars တည်ခိုးခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည့်
အတွက် သူ့ကို7Stars အလီဟု မောင်တော တမြို့လုံးက ခေါ်ဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။
မောင်တောမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွင် အဓိက ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် နာမည်ကြီးသူ အသက်
၅၄ နှစ်အရွယ်7Stars အလီ မှာ မောင်တောမြို့ အမှတ် ၁ ရပ် ကွက်တွင် အိမ်တလုံး၊ အမှတ် ၅
ရပ်ကွက်တွင် အိမ်တလုံးရှိပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ အိမ်များတွင် မရှိဘဲ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသည်ဟု
ယခုကဲ့သို့ လာဘ်ငွေယူပြီး အကြမ်းဖက် သမားများကို ပြန်လွတ်ပေးနေသာ နစက နယ်မြေမှူးများ
တွင် အမှတ် ၇ အလယ်သံကျော် နယ်မြေမှူး၊ အမှတ် ၈ မြင်းလွတ်နယ်မြေမှူးများ အဓိက ပါဝင်
ယခုကဲ့သို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သူတချို့ကို ဖမ်းဆီးထားသော်လည်း တချို့ကို
လာဘ်ငွေ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သည့်အတွက် အဆိုပါ လွှတ်ပေးသူများက တဖန် ပြန်လာပြီး
အကြမ်းဖက်မှုများ ပြု လုပ်လာမည်ကို ဒေသခံ ပြည်သူများက အထူးစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုလည်း
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုတွင် ရခိုင် ကျေးရွာအများအပြား
မီးရှို့ခံရပြီး အကြမ်းဖက် ဆူပူသူများကို ထိထိရောက်ရောက် မနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု
စွဲချက်ဖြင့် မောင်တောမြို့ အခြေစိုက် နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးကို ဇူလိုင်လ
၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှ စစ်ဆေးရန် ခေါ်ယူသွားခဲ့သည်။
Source : Arakan Times
← ပုဒ်မ ၅ (ည) ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ လွှတ်တော် မှာ အဆိုတင်သွင်း
ကွန်ဂရက် ရွှေတံဆိပ် ဆု ကို အမေရိကန် ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်စု လက္ခံမည် →
6 responses to “မူဆလင် သူဌေးတစ်ဦးကို နစကမှ လာဘ်ငွေ သိန်း ၁၃၀ ယူပြီး ပြန်လွှတ်ပေး”
Julia August 7, 2012 at 10:23 am · ·
မဆီမဆိုင်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် ဆောင်းပါးဘေးက Like ကိစ္စပြောချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးဘေးက Like Button ကို Click လုပ်ခြင်းဟာ ဒီဆောင်းပါးဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုပြီး သတင်းဖော်ပြပေး သူကို Credit ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးထဲကအကြောင်းအရာကို သဘောတူခြင်း မတူခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါက ကျွန်မရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အမြင်ပါ။ Like ပေးခြင်းဟာ FNG ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု၊ သတင်းကို အချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးမှုတို့အတွက် Credit ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာကို Likeခြင်း၊ မLikeခြင်းကို တော့ Comment များဖြင့် ဆွေးနွေးကြရအောင်လား။
mgoo August 3, 2012 at 12:10 am · ·
ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြိ့ုတွေရွာတွေမှာ ရခိုင်တွေက ၀ံသာနုရက္ခိတ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကုလားတွေဆီကဘာပစ္စည်းမှမ၀ယ် မရောင်း ကုလားတွေကိုအလုပ်မခိုင်း ကုလားတွေနဲ့မဆက်ဆံ အနုနည်းသုံးပြီးတော့ ကုလားတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လာကြတယ် ။ ထိလဲအလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကုလားတွေဟာအလုပ်မရှိလို့ အရောင်းအ၀ယ်မဖြစ်လို့ ထမင်းငတ်ကြ ဒုက္ခရောက်ကြ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။
နောက်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်ဟာ ကုလားတွေအတွက် နေမပျော်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်လာပြီး သူ့ဖာသာသူ လာရာလမ်းအတိုင်းကုလားပြည်ကိုပြန်သွားကြလိမ့်မယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခက်နေတာက တချို့နေရာတွေမှာ ကုလားထမင်းငတ်မှာကို မကြည့်ရက်တဲ့ အာဏာပိုင်အရာရှိဆိုးတွေဟာ ကုလားတွေဆီက ပိုက်ဆံကိုယူ သူတို့နာမည်ခံပြီး စားရေးရိက္ခာတွေကိုခိုးဝယ်ပေးကြတယ်။ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်ဆောင်နေကြလို့ ရခိုင်တွေကလုံးဝမကျေနပ်ကြဘူး။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်ကို ကုလားပြည်ဖြစ်အောင် ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကိုမြန်မာပြည်သူအားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းတားဆီးပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဘာမီယံဒေသက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို တာလီဘန်တွေကမိုင်းခွဲပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ ကုလားတွေကိုသနားရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပျက်စီးအောင် အားပေးနေတာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်လို့သတိပေးချင်ပါတယ်။
mylove July 26, 2012 at 12:25 pm · ·
it is the right time to take care of our country because they are crul upon us .
we all get if of our country so that they know about their circomstamce.
နိုင်ငံသားတစ်ဦး July 23, 2012 at 2:49 pm · ·
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ အာဏာရှိတဲ့ လူတွေရှိနေလို့ပါပဲ
့honey July 18, 2012 at 6:54 pm · ·
same July 18, 2012 at 5:48 pm · ·
အသားထဲကလောက်တွေ ထွက်နေတော့လည်း ဘယ်သူဆွဲထုတ်ပေးမလဲ။ရခိုင်အရေးအခင်းအတွင်းမှာလဲ စစ်တပ်က ဘင်္ဂလီတွေကို ပြန်ပြန်လွတ်ပေးပြီး ရခိုင်ကို ထိရောက်စွာ မကိုင်တွယ်ခဲ့ပါ။ဒါကို ဘင်္ဂလီတွေ သိလို့ဂရုမစိုက်ဘဲ ဆက်သောင်းကျန်းနေတာလေ။ စစ်တပ်တခုလုံး ပြောင်း သို့ အကြီးအကဲတွေကို ထိထိ ရောက်ရောက်ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးသင့်တယ်။ဒါ နိုင်ငံတော်အရေးပါ။
ဂျော်ဂျီယာ ပါလီမန် ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ရုရှား လိုလားတဲ့ ပါတီ အနိုင်ရ
x20 ဗုံးကွဲ မှု နဲ့သေဒဏ် ချမှတ် ခံထားရတဲ့ ကိုဖြိုးဝေအောင် ကို ပြန်လွှတ်ပေး
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် သမ္မတ တွေ့ ဆုံ
အကျင့်ပျက်ချ စား မှု ဖော်ထုတ်သည့် PDP ပါတီ ခေါင်းဆောင် များ ထောင်ချ ခံရ